Sacuudiga: Wararka sheegaya in amir Maxamed bixiyey dilka khashoggi aan aasaas laheyn… – Hagaag.com
Sacuudiga: Wararka sheegaya in amir Maxamed bixiyey dilka khashoggi aan aasaas laheyn…
Posted on 20 Nofeembar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Wasiirka Arrimaha Dibadda Saudi Arabia Adel al-Jubeir ayaa sheegay in King Salman bin Abdul Aziz iyo dhaxal sugaha Mohammed bin Salman ay yihiin khad casaan ah oo aan la ogoleyn isku deyada wax loogu dhimayo dhinac kasta, sida uu hadalka u dhigay.
Al-Jubeir ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey wargeyska al Sharq Awsat oo la daabacay fajirka Talaadada ayaa diiday si qeexan eedeyn kasta oo wax lagu yeelayo dhaxal sugaha Sacuudiga, ha ahaato warar hoos loo dusiyey ama siyaabo kaleba, sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay wararka lagula xiriirinayo dhaxal sugaha inuu bixiyey amarkii lagu dilay khashoggii aan laheyn wax aas aas ah.
Dhinaca kale wakaalada wararka ee Reuters ayaa ka heshay saddex ilo wareed oo ku dhow maamulka boqortooyada talada haya in xubno ka mid ah qoyska dalka xukuma ay raadinayaan in ay is hortaagaan in dhaxal sugaha uu noqdo Boqor.
Wararka ayaa sheegaya in daraasiin ka mid ah amiirrada iyo ilma adeerada oo ka mid ah laamaha xoog leh oo ka midka ah qoyska Al Saud ay doonayaan in ay arkaan isbedel ku saabsan isku xig xiga sare ee khadka boqortooyada, tani ayaa imanaysaa kadib dilkii Jamal Khashoggi oo ku kordiyey cadaadis caalami ah dhaxal sugaha oo la sheegay in uu bixiyey amarka dilka.
Wakaalada ayaa xustay in amiirrada iyo ilma adeerta aan waxba sameyn karin hadda maadaama weli boqor Salman oo 82 jir ah uu nool yahay, waxay raaciyeen amiiradaasi in ay ogyihiin in boqorka Sacuudiga uusan gees gelin doonin wiilkiisa oo wakaalada ku tilmaantay kan ugu jecel yahay caruurtiisa.
Dhanka kale Sida laga soo xigtay Reuters, waxaa laga wada hadlayaa in hogaanka carshiga ku fadhiisto Amiir Ahmed bin Abdul Aziz (76 sano) jir oo ah walaalka boqor Salman, halkii wiilka walaalkiis Mohammed bin Salman uu ku fadhiisan lahaa.
Ilo Wareedyo ay soo xigatay wakaalada Reuters ayaa sheegaya in amiiro caan ah ay aaminsan yihiin in isbedelka khadka walaayada ayna keeni doonin iska caabin ay kala kulmaan hay’adaha ammaanka iyo kuwa sir doonka oo haatan gacanta ku haya Maxamed bin Salman, maxaa yeeley daacadnimada hey’adahaasi waa mid ku dhan dhammaan qoyska boqortooyada ee ma aha shaqsi gaar ah.